Umshini Wokufaka I-Sticker Bottle Labeling - Micvd.com
Umshini Wokufaka Umshini Webhodlela Ozenzakalelayo
Ngokuhambisana nezinye izinhlobo zemishini yokufaka uketshezi, imishini yokulebula amabhodlela iyadingeka ukusiza ukuqeda inqubo yokufaka. NPACKImishini yokulebula ibhodlela ephezulu ye-line ingasiza uqinisekise ukuthi indawo yakho isebenza kahle. Noma ngabe isiphi isicelo kanye nemininingwane yokuphrinta, ungasizakala ngemishini eyenziwe ngamalebuli welebhokisi neminye imishini kusuka NPACK.
Izinsiza Ezethembekile Futhi Ezifanele Zokubopha Ibhodlela
Usebenzisa umshini wokulebula ibhodlela kusuka NPACK inganikeza indawo yakho ukuthi yini edinga ukufeza ngempumelelo inqubo yokufaka ye-liquid, namandla okufaka ama-logo abekiwe kanye neminye imibhalo nezithombe emabhodleleni ngaphambi kokuthunyelwa.
Imishini yethu yokufaka amalebula ifaka amalebula acacile, iphepha, noma amalebula e-Mylar emabhodleleni ezinhlobo eziningi nosayizi, ahlangabezana nazo zonke izindinganiso zemboni zokufakwa. Ngaso leso sikhathi, ilebula ngalinye elenziwa ngamabhodlela liyenziwe ngokwezifiso ukuhlangabezana nezidingo zakho, futhi ungakwazi futhi ukuhlanganisa lo mshini ngaphandle komunye umugqa wakho wokukhiqiza noma uwusebenzise njengemishini yangaphandle.
Imishini yethu yokulebula amabhodlela yakhiwa ukuthi ihlale iminyaka eminingi kulandela ukufakwa, okuzokusiza ukuthi uthole okuningi kumkhiqizo ngamunye owuthengayo ekukhetheni kwethu imishini yokulebula amabhodlela nokunye okuningi.
Sebenzisa umshini Wokufaka Umshini Webhodlela Wokuhlukahluka Okungafani Koketshezi Nemikhiqizo Eminye
Ungasebenzisa ilebuli yethu yamabhodlela ezinhlotsheni eziningi zezindawo zokukhiqiza, usebenzisa amalebula emikhiqizweni edinga konke kusuka kumabhodlela amancane, amancanyana kuya kweziqukathi ezinkulu. Siphatha nemodeli yomshini welebula webhodlela okuhloselwe ukusetshenziswa ezindaweni eziyingozi.
Sisebenzisa kuphela izinto ezinhle kakhulu ngesikhathi sokwakha, okwenza le mishini yokufaka amabhodlela ibhodlela ilungele izikhungo ezidinga imishini ehlala isikhathi eside ngokusetshenziswa kanzima. Ungasebenzisa imishini yethu cishe nganoma uluphi uhlobo lomkhiqizo, futhi uwahlanganise nokukhetha kwethu ama-liquid filler, ama-cappers, kanye nabahambisi ngohlelo oluphelele lokufaka uketshezi.
Thola Umshini Welebula Ofanele Amabhodlela Futhi Ucele Isilinganiso Namuhla
Dlulisa amehlo ekukhetheni kwethu imishini yokufaka amalebula kumabhodlela ngezansi bese uthola ucezu olulungile lwemishini lesikhungo sakho. Uma ungathanda imininingwane eminingi mayelana nemishini yethu yokulebula amabhodlela kanye nesilinganiso samahhala, vele uxhumane nathi namuhla. Ungathola futhi nangeminye imishini esiyiphatha ngokungezelela ukubhala imishini yamabhodlela ukuqedela imigqa yakho yokukhiqiza.
Ukukusiza ekutholeni okuningi kusukela ekuthengeni komshini welebula lakho lebhodlela, futhi sinikezela ngezinsizakalo ezifana nokufakwa, ukulungiswa, nokwenza kahle umugqa okungavumela ukuhlanganiswa okungenamthungo neminye imishini yakho.
Umshini Wokubumba Okwenziwe Ngebhodlela
Shanghai NPACK Umshini Wemishini okuzenzakalelayo womshini wokufaka ilebula wokunameka ku-shanghai. Umshini Wokubumba Okwenziwe Ngebhodlela owenzelwe ibhodlela eliyindilinga futhi uveza ubunzima belebula yezandla
Ikhasimende lizokonga izindleko ezenziwa ngesandla futhi ijubane liphezulu kakhulu. Kusetshenziswa embonini ye-Pharma, Chemical, Yezokudla nokunye
I-Automatic Npack Automatic Equipment Co, i-LTD ingochwepheshe kunoma yiziphi izinhlobo zomshini wokulebula (Umshini wokulebula Sticker, umshini wokufaka ilebula we-Glue, Umshini wokulebula wokufaka) Umshini wokulebula i-sitcker labied labcker wenzelwe amalebula wokunameka / ilebula yokunamathela, usebenzela ibhodlela eliyindilinga, iTin can, Izimbiza. Umshini wokufaka umshini wokufenda wamabhokisi we-sticker, umshini wokufaka othomathikhi webhodlela we-taper.
Umshini welebula we-Bottle Oriental Labour ulawulwa yi-servo motor (ilebula ngqo ngu-1mm), Ilungele noma yiziphi izinhlobo zesitsha esiyindilinga.
Zonke izingxenye zikagesi zomshini wokulebula zenziwe eTaiwan noma eJapan
Amaphoyinti amathathu abamba umshini uvumela ukunemba okuphezulu kokulebula okuphelele kwebhodlela eliyindilinga
Isiteshi sokusonga esijikelezayo sobubanzi bebhodlela elinokuguquguquka
Igama Umshini Wokubumba Okwenziwe Ngebhodlela
Isivinini sokubhalisa I-20-40pcs / iminithi (Ngokuya ngobude belebuli nobukhulu bhotela)
Ukuphakama kwezinto 30-200mm
Ubukhulu Bento 30-90mm
Ukuphakama kwethebula 15-140mm
Ubude belebuli 25-300mm
I-Label Roller Inside Diameter 76mm
I-Label Roller Ngaphandle Kwamitha 380mm
Ukunemba kokubhala ± 0.5mm
Ukunikezwa kwamandla kagesi 220V 50 / 60HZ 0.8KW
Ukusetshenziswa kweGesi kwephrinta 5Kg / cm ^ 2
Usayizi Wokumaketha Umshini 2000 (L) × 1000 (W) × 1250 (H) mm
Isisindo semishini yokubhala 150Kg
Isikrini sokuthinta nokulawula kwe-PLC
Cishe izindlela ezingama-30 zememori ezilebuli zokulebhelisha ezilula ngosayizi webhodlela.
Faka ilebula elincane noma elilahlekile.
Ukukhethwa kwejubane okuvumelanisiwe
IServo motor drive ngokunemba okuphezulu nesivinini esikhulu
Alikho ibhodlela alikho ilebuli.
Ukulungisa umshini wokufaka amakhodi we-foil oshisayo, ongaphrinta i-EXP MFG BATCH kwilebula
Umshini Wokufaka ilebula we-Ampoule & Vial
Umshini wokufaka isilebuli se-Ampoule / vial ukhiqizwa yiShanghai NPACK Izinsiza Ezenzekelako Co. yenzelwe ukulebhelisha ibhodlela lomuthi, i-Ampoule, uketshezi lomlomo, ishubhu legazi, ipeni, i-Vial
Umshini we-othomathikhi we-Oral Liquid Bottles, Olebula lomshini wokuzenzakalelayo we-othomathikhi we-ampoule / tube / ipeni.
Lo mshini udidiyelwe yi-servo motor futhi ulungisa umshini wokufaka amakhodi we-foil oshisayo phezulu kwelebuli lekhanda.
1. 304 Ukwakhiwa kohlaka lwensimbi engagqwali
2. Ijubane lokulebula livunyelaniswa ngokuzenzakalela nejubane lokuhambisa ukuqinisekisa ilebula yekhwalithi;
3. okuzenzakalelayo infeed ububanzi turntable 550mm
4. Umshini wokufaka amakhodi oshisayo oshisayo
5. I-Servo motor ne-PLC ne-Touch Screen ziqinisekisa i-prefect ilebula ngqo
Igama Umshini welebula we-Ampoule / Vial
Drive IServo Motor Driver
Isivinini sokubhalisa 100-180PCS / Min
Ububanzi Bebhodlela 10mm-30mm
Ubude belebuli 15mm-150mm
Ukuphakama kwelebuli 10mm-90mm
Ilebuli Eqondile 1mm
Ububanzi Bokujikeleza Kwe-Label 300mm
Ilebuli ye-Labore Core 76mm
Dimension 1800mm * 800mm * 1600mm
Power Isigaba Esingashadi esingu-220V 750W
1. Hlola ngokuzenzakalela amalebula
2. Ifakwe ngedivaysi yokuxwayisa yamalebula anganele, amalebula aphukile
3. Alikho ibhodlela, alikho ilebuli
4. Awekho amalebula, akunwebuli kanye nesixwayiso esizenzakalelayo
5. Akukho Ribbon, isexwayiso esizenzakalelayo
6. Indawo yokuma ebhodleleni, bese ilala othomathikhi ngokubhala
7. Ilebuli yokulawulwa kwezimoto zeServo, ayikho ikhefu lelebula, isivinini esikhulu.
Umshini Wokufaka Umshini Wokubopha Ibhodlela Oqondile
NPACK ukwenziwa komshini wokufaka ilebula wokunameka. Umshini wokufaka ilebula wokunameka ngokuzenzakalela owenzelwe ibhodlela eliyindilinga futhi uveza inkathazo yelebula elenziwa ngesandla.
Umshini wokufaka ilebula webhodlela oyindilinga wenzelwe ilebula le-sticker / ilebuli ye-Adheisve, usebenzela ibhodlela eliyindilinga, iTin can, Izimbiza. Lo mshini usonga ngokuzenzakalela ilebula lesitika esitsheni esiyindilinga.
Ikhasimende lizokonga izindleko ezenziwa ngesandla futhi ijubane liphezulu kakhulu. Kusetshenziswa embonini ye-Pharma, Chemical, Yezokudla nokunye.
Ukugoqa okuzenzakalelayo okungu-1 okuzungeze umshini wokulebula kulawulwa yi-servo motor (ilebula ngqo ngu-1mm), Ifanele noma yiziphi izinhlobo zesitsha esiyindilinga.
2 Ikhasimende alidingi ukushintsha noma yiziphi izingxenye uma ushintsha ibhodlela elihlukile, ikhasimende kulula ukulungisa nokusebenza komshini wokulebula. umshini uyakwazi ukusebenza amahora angama-24.
3 Zonke izingxenye zikagesi zomshini wokulebula zenziwa eTaiwan noma eJapan
imodeli Umshini Wokufaka Umshini Welebhu ka-NP-RL Round
Speed 40-150 PC / Min
Ukufaka ilebula nse ± 1.0mm
Usayizi welebuli (L) 20-280mm (H) 30-140mm
Usayizi wezinto ezibonakalayo Φ40-Φ100mm (H) 40-300mm
Roll ngaphakathi ΦXUMUMmm
Roll ngaphandle ubukhulu ΦXUMUMmm
Usayizi womshini (L) 1800 * (W) 850 * (H) 1450 (mm)
Ukunikezwa kwamandla kagesi AC220V 50Hz / 60Hz 1500W
1. Isikrini sokuthinta nokulawula kwe-PLC
2. Cishe izindlela zokugcina inkumbulo ezingama-30 zokulebhelanisa amapharamitha zilula ngosayizi webhodlela.
3. Ukutholwa kwelebula elincane noma elilahlekile.
4. Ukukhethwa kwejubane okuvumelanisiwe
5. IServo motor drive ngokunemba okuphezulu nesivinini esikhulu
6. Alikho ibhodlela alikho ilebuli.
7. Ukulungisa umshini wokufaka amakhodi we-foil oshisayo, ongaphrinta i-EXP MFG BATCH kwilebula
Umshini Wokubumba Isitika
Umshini wokufaka ilebula wokunameka kwesikhwama ukhiqizwa ngu NPACK. kufakwa amalebula esikhwameni, esikhwameni, ekhelinini, ekhadini ngelebula lesinamatheli
Ilebula ilebuli / ukunamathela kokuzinamathela. Umshini wokulebhelisha ingaphezulu. Ukuhlukanisa isikhwama ngokuzenzakalelayo.
Umshini Wokufaka ilebuli yomshini ulungele umshini we-doypack popuch, isikhwama, isachet, umshini wokulebhelisha ikhadi. Lo mshini ungahlukanisa isikhwama esingenalutho ngokuzenzekelayo ngamunye ngamunye.
1 Ikhanda lelebuli lingaphezulu kwe-conveyor
2 Izingxenye zikagesi zenziwa eJapan noma eYurophu
3 Ngaphandle kwesikhwama, ngaphandle kwelebuli
4 Ilungele ilebuli / ilebuli yokunamathela
5 Ilebuli esebhokisini, esikhwameni, ekhadini, esikhwameni se-Can kanye nezinhlobonhlobo zesitsha esingaphezulu
Igama Umshini Wokubumba Isitika
Isivinini sokubhalisa I-20-200pcs / iminithi
(Kuya ngobude belebula nobukhulu bebhodlela)
Ubukhulu Bento 20-200mm
Ukuphakama kwethebula 15-110mm
I-Label Roller Ngaphandle Kwamitha 350mm
Ukunemba kokubhala ± 0.8mm
Ukunikezwa kwamandla kagesi 220V 50 / 60HZ 0.75KW
Ukusetshenziswa kweGesi kwephrinta 5Kg / cm ^ 2 (uma engeza umshini wokubhala)
Usayizi Wokumaketha Umshini 1600 (L) × 550 (W) × 1600 (H) mm
Isisindo semishini yokubhala 250Kg
I-1 PLC nohlelo lokulawula ukuthinta
2 Umzimba omkhulu womshini ngu-304SS
3 Sisebenzisa i-servo motor nezinzwa (Zenziwe eJapan) ukuze siqinisekise ukuthi ilebula elikhulu lingaqondile
4 Ukulungisa umshini wokufaka amakhodi ukuphrinta imininingwane yosuku kwelebula
5 Akunalutho, Akunazimpawu
6 Ithuluzi lokuphaka isikhwama lingahlukanisa isikhwama ngokuzenzekelayo
Umshini welebuli ye-Side Sticker ephezulu
Umshini wokufaka ilebuli eseceleni ephezulu ukhiqizwa ngu NPACK. Okungabhalwa ilebuli phezulu, ikani leToti, isikhwama nazo zonke izinhlobo zomhlaba.
Umshini Ophezulu Wokubeka Umshini We-Sticker ulungele zonke izinhlobo zezinto ezinamapulangwe ebusweni, njengamabhokisi, amabhodlela, amathini, njll. Kusetshenziswe kahle kwezimonyo, iziphuzo, amakhemikhali, ezokwelapha, imboni yokudla, i-CD yemishini, uwoyela ohlukahlukene, njll. ukulebhelisha indawo yepulani lomshini.
3 Ngaphandle kwesitsha, ngaphandle kokubhala
5 Ilebuli esebhokisini, esikhwameni, ku-Can kanye nezinhlobonhlobo zesitsha sangaphandle
Igama Umshini welebuli ye-Side Sticker ephezulu
Umshini Wokufaka Izimpawu Zokuzenzakalela Okuzenzakalelayo Emaceleni Amabili
Umshini Wokufaka Izimpawu Zokuzenzakalela Okuzenzakalelayo Wabili waklanywa ngu NPACK. Kungumshini wesikwele / wefule / oyindilinga oyindilinga ohlangothini oluphindwe kabili (ngaphambili nangasemuva).
Lo mshini ungagxisha ibhodlela, i-motor drive eyodwa idonsa umshini webhodlela wokuphrinta kanye nodlulisela phambili, ibhodlela lizoba ulayini ohamba kusihambisi. IServo motor, i-PLC nesikrini sokuthinta kuzoba ilebula eliphakeme.
Umshini we-othomathikhi we-othomathikhi we-othomathikhi we-Side Sticker Labheli liklanyelwe esisekelweni sezinhlangothi ezimbili zebhodlela eliyindilinga, ibhodlela elisicaba. Ukuze uhlangane namanye amakhasimende ukuze uhlangabezane nezidingo zelebula izinhlangothi ezimbili namabhodlela ayindilinga. kungumuthi, amakhemikhali ansuku zonke, izinsiza zokudla, i-Elektroniki nokunye. Lo mshini ulawula i-servo motor ne-PLC kanye nesikrini sokuthinta, kungumshini wokubeka amalebula amaningi / wokunamathela
1 iServo motor, PLC nesikrini sokuthinta
2 Hlukanisa ibhodlela ngakunye bese ucindezela ibhodlela ku-conveyor
3 Namathisela amalebula amabili wokunamathela (ngaphambili nangemuva) ngasikhathi sinye
4 Ihlola umshini wokugcwalisa nokufaka i-ciling
Igama Umshini Wokufaka Izimpawu Zokuzenzakalela Okuzenzakalelayo Emaceleni Amabili
Isivinini sokubhalisa I-60-350pcs / iminithi (Ngokuya ngobude belebuli nobukhulu bhotela)
Ukuphakama kwezinto 30-350mm
Ubukhulu Bento 20-120mm
I-Label Roller Ngaphandle Kwamitha 420mm
Ukunemba kokubhala ± 1mm
Ukunikezwa kwamandla kagesi I-220V 50 / 60HZ 3.5KW Isigaba esisodwa
Usayizi Wokumaketha Umshini 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Isisindo semishini yokubhala 450Kg
1. I-PLC nesikrini sokuthinta, i-servo motor
6. Ukulawulwa kwezimoto zeServo, ilebula ezinzile.
Inzwa yelebula nezingxenye zikagesi zenziwa eJapan
8 Kufanele ibhodlela eliyindilinga / leflethi / lesikwele
Umshini Wokufaka Umshini Wokubopha Okuzenzakalelayo we-Double Side Square
NPACK akhiqize umshini wokulembesa wokuzinamathela, Umshini wokulembela ohlangothini olusha, Umshini wokufaka ilebula we-glue oshisayo / obandayo, Umshini wokufaka ilebula we-othomathikhi.
Umshini wokufaka ilebula webhodlela we-square izinhlangothi ezimbili unganamathisela amalebula amabili wokunameka ebhodleleni bese ahlangana ne-PLC nesikrini sokuthinta
Umshini wokufaka ilebula wezinhlamvu we-NP-TS Double yakhelwe esisekelweni somshini wokulebula izinhlangothi ezimbili, ukuze uhlangane namanye amakhasimende ukuze uhlangabezane nezidingo zelebula izinhlangothi ezimbili namabhodlela ayindilinga. kusebenza kakhulu kwesikwele, emabhodleleni aphansi, ezitsheni eziyindilinga zemithi, amakhemikhali ansuku zonke, okuhlinzekwayo kokudla amasiko, i-Elektroniki.
Umshini wokulebula kabili we-sidel umshini wokulebula weMulti-Function, isudi yeFlat, i-Oval, i-Square, ibhodlela le-Round. lo mshini ulawulwa yi-servo motor drive ukuze uqinisekise ilebula ephelele.
1 Umshini wokubhalwa kwe-othomathikhi we-Double Side olembiza ngebhodlela ejikelezayo kanye nebhodlela eliyindilinga
2 Xhuma ulayini wokugcwalisa nowokufaka i-Caps ngejubane eliphezulu
3 I-Servo motor ne-PLC ingaqinisekisa ukuthi ilebula lisho ngqo
4 Ikhasimende kulula ukuhlehlisa umshini lapho ushintsha usayizi webhodlela we-diffnt, asikho isidingo sokushintsha noma yiziphi izingxenye
Igama Umshini Wokulebula Okuphezulu Kwama-Speed ​​Speed ​​Side ama-Bottle
1. I-PLC ne-Thinta isikrini sokuxhumana, hlola ngokuzenzakalela amalebula
4. Isixwayiso esizenzakalelayo Ngaphandle kwamalebula
7. Ilebuli ephelele
8. Ilungele noma yiziphi izinhlobo zebhodlela, amathini, izimbiza
Amakhasimende angu-9 angaguqula i-angle lelebula ngokusho kwelebula